Hrad Valdštejn - သင့် YouTube ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်မာလ်တီမီဒီယာစီမံကိန်းများကိုအခမဲ့ဂီတနှင့်မီဒီယာ downloads,
ရဲတိုက် Wallenstein	မှတ်ချက် Leave
Wallenstein (Waldstein) Bohemian ပရဒိသု Semily လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အနီးရှိခရိုင်အတွင်းပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယနှစ်ဝက် 13 ထံမှ Wallenstein ၏သခင်၏ဘိုးဘွားရဲတိုက်။ ရာစု။ ဒါဟာဒေသတွင်း၌ရှေးအကျဆုံးရဲတိုက်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
ရဲတိုက် 1260 ဖို့နှစ်ပေါင်း 1280 အကြောင်းကို Markvartic အကိုင်းအခက်ထဲကတစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ Jaroslav Hrušticeသို့မဟုတ်မိမိသား Zdenek Wallenstein ထံမှဖြစ်ကောင်းခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုနေထိုင်ရာဖြစ်လာခဲ့သည်သူတို့နှင့်သူတို့၏သားစဉ်မြေးဆက် Wallenstein ၏ predicate မင်းကိုအသုံးပြုထားတဲ့အရသိရသည်။ သူတို့ဟာ Wallenstein အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်။
သူသည်မိသားစု LEMBERK, Lemberk ၏ဟာဗဲလ်၏တတိယသား၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကြောင့်Hrušticeထံမှ Jaroslav (Hrušticeခံတပ် Turnova မှာ) ပထမဦးဆုံး Jaroslav Lemberka ၏အမည်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Lemberk ၏ဟာဗဲလ်မြောက်ပိုင်းဘိုဟီးမီးယားအတွက်အကူအညီများ Pfemyslids များအတွက်ကြီးမားသောဒေသများတွင်အနိုင်ရသူကို Markvartic ထံမှလာ၏။ Jaroslav မိခင် 1995 အတွက် canonized Lemberk ၏ Zdislava ခဲ့သည်။
Wallenstein 100 နှစ်ပေါင်းနေ၏။ ဥပမာ။ ငါ Wallenstein ၏Zdeněk, 1336 အတွက် 1500 Margrave ချားလ်စ်, နောက်ပိုင်းတွင်ဘုရင်ကချားလ်စ် IV groschens ထုတ်ချေးသူအလစ်ခကျြရှငျဘုရငျနှငျ့ယောဟနျဗွန် Wallenstein သို့စစ်တပ်လေ့လာရေးခရီးသွားပါဝင်ခဲ့သူကို Luxemburg ဘုရင်ယောဟနျ, Wallenstein ၏ Hynek ၏ courtier ကိုငါသိ၏။
14 အဆုံး။ ရာစုအိမ်ကြီး Markvartic ဖို့လည်းပိုင်သောအပြေးပြိုင်ပွဲ Vartenberks အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ Wartenberg ၏ဟင်နရီဟာသူတို့ရဲ့ဥပဒေကြမ်းများအခြေချဖို့ဆုံးဖြတ်အတူ 1424 နွေဦး Turnovo ဖို့စစ်တပ်နှင့်အတူလာသော Trocnov ၏ Hussite ခေါင်းဆောင်ဇန်နဝါရီ Zizka, သူ့ကိုသိမ်းပိုက်သည်၎င်း၏ကျောင်းတိုက်ငြင်းဆန်နှင့် Wallenstein သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူ 1427 အတွက်မင်းသား Sigismund Korybutovič, ပလ္လင်တော်အဘို့အကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဘို့ထောင်ကျတဲ့သူမစ္စတာValečov, သူ့မိတ်ဆွေများ၏သို့ပြောသည်။ 1431 ခုနှစ်တွင် (ထို့နောက် Hradek ၏) Stakory ထံမှ Hussites Castle Ramesh ကွာရှင်း၏အခြားထောက်ခံသူဖြစ်ခဲ့သည်။
နှစ်များတွင် 1438-1439 ရဲတိုက် (နှင့်အနီးအနားမှာအခြေချနေထိုင်Kavčiny) ဓားပြများ၏ဂိုဏ်းသိမ်းဆည်းရမိထို့ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံး 1440 အတွက်ပြည်နယ်ငွေသားသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ လူစားထိုးပိုင်ရှင်တွေကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ သူတို့ဟာSmiřic၏ 1514 Smiřičtíကတည်းကဒီနေရာမှာ Helfenburk ၏Šofovéနေထိုင်ခဲ့တယ်။ 1550 ရဲတိုက်တစ်ဝှမ်းမီးအတွက်ချမီးရှို့လေ၏။
17 ရဲ့အဆုံးမှာ။ Vaclav Holan Rovenský၏အပျက်အယွင်းအခြေချရာစုရသေ့ကဒီမှာစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဘုရားဖူးခံစားရသည်။ အဆိုပါဒေသခံအိမ်ခြံမြေ Wallenstein (ထိုအနှစ် 1620-1821 ပိုင်ရှင်များ) ၏ပိုင်ရှင်များနှင့်သူတို့နောက်Aehrenthalové (1821-1945) တစ်ဦးရင်ခုန်စရာဘုရားဖူးများ၏အပျက်အယွင်းခြင်းမှတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ 1713 အတွက်ပိတ်သောကျောက် 1722 Chapel built ပထမဦးဆုံးဝင်းခဲ့ခြေလှမ်းမြှုတ်။ Nepomuk ဂျွန်နှင့်မကြာမီ 1817 ၏ရုပ်ပွားတော်၏နံပါတ်ပြီးနောက်ထို့နောက်စိန့် Chapel ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယောဟန်သည်ဗတ္တိဇံဆရာ။ 1836 သောကျောက်တံတားများအတွက်တံခါးပေါက်တည်ဆောက်ခဲ့နှစ်မှာပန်းပုတစ်စီးရီးတပ်ဆင်ထားသည်။
ရဲတိုက်၌စားသောက်ဆိုင်ယခုနှစ် 1923 1949 ကတည်းကČihulkovaမိသားစုငှားရမ်းခဲ့သည်။ ထိုနောက်မှအဖွဲ့ Sokol takeoff တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ တောင်တက်သမားများအတွက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရေးစင်တာကတည်းက။
အပျက်အယွင်းအစိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်ခရီးသွားဧည့်လမ်းကြောင်းတလျှောက်တွင်ခြေလျင်လက်လှမ်းဖြစ်ကြသည်အနီးဆုံးကားတစ်စီးပန်းခြံအကြောင်းကို 1 ကီလိုမီတာကွာသည်။ Turnova မှစ. အဘယ်သူ၏ cadastral ဧရိယာရဲတိုက်မှာMašov Turnova တည်ရှိသည်အတွက်ဝေး3ကီလိုမီတာ SSE ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးတည်ချက်။ ပဲ့ထိန်းခရီးစဉ်သည်ရာသီအလိုက်လအတွင်းရရှိနိုင်ပါသည်ဝန်ခံချက်ပေးဆောင်။ ပျက်စီးခြင်းကိုယ်တိုင်ကတန်းတူ 389 မီတာဖြစ်ပါသည်, အမြင့် 90 မီတာဖြစ်ပါတယ်။ ရဲတိုက်သဘာဝတရားဘေးမဲ့တောအနီးအရှေ့တောင်ဘက်ခုနှစ်တွင် Hruboskalsko ကိုတိုးချဲ့။
Hrad se německynazýval Waldenstein, းčeskémpřekladu tedy ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်သစ်တော.
Obraz světce v kapličce je možná jedinou existující podobiznou Karla Hynka Máchy။ အဆိုပါ 1836 Francis က Masek (Maschek, 1790-1862) ထံမှပန်းချီကားများ၏စာရေးဆရာ။
na Valdštejněsložil skladatel Josef Bohuslav Foerster oratorium SV ။ Vaclavaပဉ္စမဆင်ဖိုနီ.
← အဆိုပါဧရာမနွေဦး 2018 အတွက် Roudnice
ကတ်ထူပြားများနှင့် Binder ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှု →